(လင်းယုန်ငှက် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
↑ BirdLife International (2009). Spilornis cheela. In: IUCN 2008. IUCN Red List of Threatened Species. Retrieved 11 December 2009.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လင်းယုန်&oldid=523753" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ ၀၄:၄၉ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။